mars 2017 - Page 3 sur 70 -
Tontolo iainana : Miteraka homamiadana ny setroka ateraky ny harona plastika
Taorian’ny fandrarana ny fampiasana ireo harona plastika latsaky ny « 50 micron » misy tahony, dia nanavao io didim-pitondrana io ny fitondram-panjakana ka mandrara tanteraka ny fampiasana ny plastika rehetra latsaky ny « 50 micron » na inona na …Tohiny
Notanterahina omaly alakamisy 30 Marsa ny andro natokana ho an’ny zandarimariam-pirenena. Ho fisantarana izany dia nisy ny fanomezan-drà nataon’izy ireo teny amin’ny hopitaly HJRA omaly, nanomboka tamin’ny 08 ora maraina. Zandary 240 izy ireo no …Tohiny
Efa tsy voafehy intsony. Voaporofo ankehitriny fa tsy mahavita ny asany ary tsy mahafehy ny andraikiny intsony ny ben’ny tanànan’i Mahajanga, Mokthar Salim Andriatomanga. Raha efa nikononkonona ny hampiatona an’ity ben’ny tanàna avy amin’ny antoko …Tohiny
Ao anatin’ny fankalazana ny faha-70 taonan’ny tolom-panafahana, nisy fihaonam-pikarohana ara-tsiantifika iraisam-pirenena nandalinana ny tena zava-niseho marina tamin’ny 29 Marsa 1947, omaly teny Tsimbazaza. “Firenena Malagasy afaka sy mahaleotena”, io no lohahevitry ny fihaonana. Nosafidiana manokana …Tohiny